မောင်မှိုင်းလွင် (အင်းဝ) | MoeMaKa Burmese News & Media
Posts Tagged ‘ မောင်မှိုင်းလွင် (အင်းဝ) ’
မောင်မှိုင်းလွင် (အင်းဝ) ● အလေးနီ (မိုးမခ) ဇူလိုင် ၂၈၊ ၂၀၁၈ “အလေးပြု” အော်သံအဆုံးမှာ ညာလက်ရုံးတွေ မိုးကိုတိုက် အလေးနီ ဦးခိုက်ကြပြီ။ တောင်တန်းတွေလည်း အလေးနီ မြစ်ချောင်းတွေလည်း အလေးနီ သစ်တောအုပ်လည်း...
Illustration – KT မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ) – အိပ်မက် (မိုးမခ) မေ ၄၊ ၂၀၁၇ အိပ်ရေးမက်တာမဟုတ် အိပ်ရင်းမြင်မက်နေတာလည်းမဟုတ် တသက်တာလုံး နေ့ရောညပါ မက်မက်စက်စက် တပ်မက်ခဲ့ရတဲ့အိပ်မက်။ မစွန့်ပစ်ရက် မစားသုံးရက် အဲဒီ...
မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ) – “ဆီဆမ်း ဆားဖြူး” (မိုးမခ) မတ် ၂၊ ၂၀၁၇ အာသာပြေ ရှိတာလေးနဲ့သာ စားလိုက်ကြပါတော့ ဒို့ထမင်းပန်းကန်မှာ ချစ်သူတယောက် အသေစောပြီး မုန်းသူတွေ အသက်ရှည်နေတာနဲ့ အရသာတွေ ပျောက်ကုန်ပေါ့ကွယ်။ ။...
Illustration – KT# မောင်မှိုင်းလွင်(အင်းဝ) – တိုက်စစ်မှူး (မိုးမခ) အောက်တုိုဘာ ၁၅၊ ၂၀၁၆ တိုင် မှန်ထွက်တယ် ဘားတန်းပေါ် ကျော်သွားတယ် ဂိုးသမား ပုတ်ထုတ်ကာကွယ် နောက်တန်းက ဖျက်လိုက်တယ် ထားတော့ ဝင်တာ မဝင်တာ...
မောင်မှိုင်းလွင် (အင်းဝ) ● သစ္စာငှက် (မိုးမခ) စက်တင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၁၆ အောက်ချင်းငှက်သည် သစ္စာတရား၏ နိမိတ်ပုံ။ အောက်ချင်းငှက်သည် ချင်းလူမျိုး၏ သင်္ကေတ။ ချင်းနှင့်အောက်ချင်း၊သစ္စာချင်းဆုံ ပင်လုံ ယုံ၍ ပုံအပ်ခဲ့ကြ။ ၄၇...